Black Friday 2022 ao amin'ny Apple: tolotra amin'ny Mac, iPhone, iPad ary maro hafa! | Avy amin'ny mac aho
Zoma mainty ao amin'ny Apple
Ignatius Room | 29/11/2021 08:00 | Nohavaozina amin'ny 30/11/2021 09:08 | Apple products
Avy amin'ny mac aho safidio ny
tolotra tsara indrindra avy amin'ny Black Zoma 2021
Etsy ambany no hahitanao ny tolotra tsara indrindra, havaozina isan'ora, mba tsy ho tara ianao.
Jereo ny tolotra rehetra misy
Black Friday dia iray amin'ireo fotoana tsara indrindra amin'ny taona mividy izay vokatra amin'ny karazana, tsy vokatra elektronika fotsiny. Amin'ity taona ity, ny Black Friday dia ny 26 Novambra, na izany aza, mandritra ny andro maromaro, dia efa afaka mahita tolotra samihafa ho an'ny zava-drehetra isika.
Mividiana vokatra Apple, mandritra ny Black Friday, lasa fanao ho an'ny mpampiasa maro izany, noho ireo fihenam-bidy lehibe hitanay amin'ireo daty ireo. Raha te-hahafantatra izay vokatra Apple ho azonao vidiana mandritra ny Black Friday ianao dia manasa anao aho hanohy hamaky.
Inona no vokatra Apple amidy amin'ny Black Friday
Jereo ny tolotra rehetra amin'ny MacBook
Ny MacBook Pros 14-inch sy 16-inch vaovao mahafinaritra tsy ho eo mandritra ny Black Friday. Ireo izay tsy ho diso ny fanendrena dia ny Mac rehetra miaraka amin'ny processeur M1, manomboka amin'ny iMac 24-inch nohavaozina, arahin'ny MacBook Air, ny MacBook Pro 13-inch ary ny Mac mini.
Jereo ny tolotra rehetra ao amin'ny Apple Watch
Ny Apple Watch dia iray amin'ireo raikitra amin'ny Black Friday rehetra. Na dia ho sarotra be aza ny hahita tolotra modely izay tonga teny an-tsena vao haingana, ny Series 7, nandritra ny herinandro maromaro, dia afaka mahita tolotra be dia be amin'ny Series 6 isika, modely izay manana fandrefesana mitovy amin'ny ny série 7.
Saingy, ankoatra izany, dia ho hitantsika ihany koa tolotra mampientam-po amin'ny Apple Watch SE sy ny Series 3, ny maodely tranainy indrindra amin'ity sehatra ity izay, miaraka amin'ny 4 taona eny an-tsena, dia mifanaraka amin'ny dikan-teny farany amin'ny watchOS, na dia tsy manana fiasa maro aza. Raha mila fampandrenesana fotsiny ianao dia mety tsara ny Series 3.
Apple iPhone 13 (128 GB) ...
Apple iPhone 13 Mini ...
Jereo ny tolotra rehetra amin'ny iPhone
Ny andiany iPhone 13 manontolo dia manana a tena sarotra ny fahazoana hatramin'ny nanombohana, izay tsy maintsy ampianay fa vao tonga eny an-tsena izy io, noho izany dia inoana fa tsy hahita tolotra ho an'ity modely ity isika.
Miaraka amin'ny herintaona eny an-tsena ary miaraka amin'ny fandefasana ny iPhone 13, ny iPhone 12 dia nihena ny vidiny tamin'ny dikan-teny rehetra, ho fotoana tsara hihazonana azy, satria tsy ho diso izany fankalazana izany izy.
Apple Airpods Pro miaraka amin'ny ...
Apple AirPods vaovao ...
Jereo ny tolotra rehetra ao amin'ny AirPod
Miaraka amin'ny fandefasana ny taranaka fahatelo an'ny AirPdos, manana herinandro vitsivitsy mahaliana izahay mifandray amin'ny taranaka faharoa an'ny AirPods, taranaka faharoa izay mbola amidin'i Apple, fa ny dikan-teny miaraka amin'ny vata fampangatsiahana tariby tselatra ihany.
AirPods Max sy AirPods Pro nampidina ny vidiny izy ireo tato anatin'ny volana vitsivitsy, ka tsy afaka tsy ho eo amin'ny Black Friday izy ireo.
Jereo ny tolotra rehetra amin'ny iPad
Hitantsika tato anatin'ny herinandro vitsivitsy mahaliana dia manolotra ny iPad Pro 2021 sy ny iPad Pro 2020. Ny iPad Air dia tsy ho diso ny fanendrena miaraka amin'ny Black Friday, izay azo antoka fa tsy asaina ny iPad mini vaovao sy ny iPad izay naseho iray volana mahery lasa izay.
Saika hatramin'ny nanombohany, na ny Apple Pencil andiany faha-1 sy faha-2, amidy foanaNa izany aza, mandritra ny Black Friday dia mety hahatratra ny ambany indrindra izy io.
TOP Black Friday TOLOTRA
€ 169. (Talohan'ny € 349,95)
€ 109,99. (Talohan'ny € 199,95)
€ 149. (Talohan'ny € 299,95)
Beats Studio Buds –...
€ 119. (Talohan'ny € 149,95)
Wi-Fi Smart Plug ...
Withings Body + Scale ...
€ 69,95. (Talohan'ny € 99,95)
Philips Hue Pack misy 2 ...
€ 89,99. (Talohan'ny € 159,95)
Raha maniry bebe kokoa ianao dia zahao ireo tolotra azo atao anio:
Fivarotana hafa misy tolotra amin'ny Black Friday
Ireto ambany ireto misy ny fivarotana izay nanatevin-daharana ny Black Friday 2018 miaraka amin'ny fihenam-bidy amin'ny vokatra Apple sy kojakoja ho an'ny fitaovana marika Cupertino. Araraoty ny fihenam-bidy rehetra amin'ny Mac, iPhone, iPad, Apple Watch ary maro hafa.
Araka ny efa fantatrao, ny volana Oktobra dia volana lasa izay, rehefa mandeha ny fotoana, dia nanjary iray amin'ireo malaza indrindra amin'ny resaka fiantsenana. Ary izany dia, ao aminy ilay antsoina hoe Zoma Mainty dia atao isan-taona, ankoatry ny tolotra hafa toa ny 11.11 na Cyber ​​Monday.
Na izany na tsy izany, ny Zoma Mainty dia efa eto, fa ankehitriny, avy aiza izy io? Inona no azonao vidiana anio? Mamaly anao izahay.
Inona no atao hoe zoma mainty
Azo antoka fa efa mahalala ny Zoma Mainty ianao amin'ny tolotra omeny, saingy azo antoka fa tsy fantatrao hoe avy aiza ity andro malaza ity, ary koa ny tantarany. Ary ny marina dia tsy mazava tsara ny niandohany.
Maro no manome ny anaran'ny androany hoe Jay Gould sy Jim Fisk, famatsiam-bola roa lehibe ao amin'ny Wall Street, izay taorian'ny fiezahana mafy hanatsarana ny fidiram-bolan'ny orinasan'izy ireo, dia niafara tamin'ny fatiantoka tamin'ny zoma 24 novambra 1869. Amin'izany, Nantsoin'izy ireo androany hoe "Zoma Mainty", na "Zoma Mainty".
Na izany aza, omena ihany koa ny trosa fivarotana kely, izay taorian'ny fatiantoka nandritra ny volana maro, nantsoina hoe andro isan'ny mena, nony farany taorian'ny Thanksgiving dia tonga ilay antsoina hoe isa mainty, izany hoe, ny tombony lehibe indrindra.
Farany, mihevitra ny hafa fa avy izy io avy amin'ny gazety New York TimesFa tao amin'ny laharana 19 Novambra 1975, taorian'ny korontana nipoitra tany New York City noho ny fifampiraharahana Thanksgiving, dia nisy lahatsoratra iray nivoaka, izay no voalohany nanome azy ny adjectif "mainty" hatramin'ny andro amin'ny herinandro.
Na izany aza, ny zava-dehibe dia nanjary iray amin'ireo zava-dehibe indrindra amin'ny toekarena any Etazonia ity andro ity, ary izany no antony ankehitriny, saika amin'ny firenena rehetra any Eropa dia ankalazaina ihany koa Androany miaraka amin'ny varotra varotra sy tolotra maro any amin'ny magazay, ary mba hifanaraka amin'ny fotoana misy antsika ankehitriny, dia hitantsika ny fomba ananan'ny magazay malaza indrindra an-tserasera, anisan'izany ny Amazon na AliExpress ankoatry ny maro hafa, ny fihenam-bidy lehibe amin'ny vokatra vokariny.
Rahoviana no ankalazaina ny zoma mainty
Ankalazaina hatrany ny zoma mainty ny ampitso aorian'ny Thanksgiving any Etazonia, izay ankalazaina foana amin'ny Alakamisy fahefatry ny volana Novambra, ary satria ny andro manaraka dia Zoma, io teny io no ampiasaina sy ampiasaina.
Raha ny voalaza dia ny marina dia tsy misy daty manokana hankalazana io fialantsasatra isan-taona io, satria araka ny nolazainay fa zoma fahefatra amin'ny taona. Amin'ity indray mitoraka ity, Ny zoma mainty 2018 dia hatao ny 23 novambra manerana an'izao tontolo izao. Na izany na tsy izany, raha tianao, dia hanana tolotra ihany koa ianao alohan'ity andro ity mandritra ny herinandro lasa, satria ny fivarotana lehibe dia manomana andro vitsivitsy mialoha.
Inona no vokatra hovidiana amin'ny Zoma Mainty
Amin'ny Zoma Mainty, ny vokatra avy amin'ny sokajy rehetra dia amidy amina fihenam-bidy lehibe, satria amin'izany no ahazoanao vola bebe kokoa noho ny famerana azy amin'ny sokajy tokana. Na izany aza, tsy misy isalasalana fa manana andraikitra lehibe ny teknolojia amin'ity lafiny ity, satria izy ireo matetika no fanomezana andrasan'ny besinimaro indrindra indrindra.
Amin'izany fomba izany, na dia tsy manao zavatra manokana aza i Apple amin'izao fotoana izao, any amin'ny fivarotana toa an'i Amazon dia afaka mahita tolotra mahaliana amin'ny vokatr'izy ireo ianao, indrindra ireo izay tsy dia vao haingana. Amin'izany fomba izany, raha mitady hanavao ny iPhone, iPad na Mac ianao, saingy tsy te hampiasa vola be amin'ny taranaka vaovao amin'ireto vokatra ireto, Azonao atao ny mividy ny kinova taloha amin'ny fivarotana maro (izay amin'ny ankamaroan'ny tranga dia mbola vokatra misongadina ihany), na azo inoana aza fa hahita tolotra ianao amin'ny endriny farany.
Ny hevitra tsara hafa dia mampiasa vola amin'ny add-on ho an'ny fitaovanaoHatramin'izao andro izao, ary indrindra amin'ny Zoma Mainty, matetika dia matetika ny mahita fihenam-bidy mahavariana sy fifampiraharahana amin'ny fonony, kojakoja maro samihafa, na rindrambaiko mihitsy aza. Aza avela hiala io vintana io!
Ireto misy tolotra Black Friday bebe kokoa amin'ny vokatra Apple:
Mac zoma mainty
Nahoana no mendrika ny mividy vokatra Apple amin'ny Black Friday?
Black Friday dia ny ny fotoana amin'ny taona izay latsaka indrindra ny vokatra rehetra, tsy avy amin'ny Apple ihany, fa avy amin'ny mpanamboatra hafa koa, satria mila manome toerana ao amin'ny trano fanatobiana azy izy ireo mba hahazoana vokatra vaovao sy izay ho avy.
Raha ny momba an'i Apple dia ankalazaina volana vitsivitsy taorian'ny fanolorana ny vokatra vaovao amin'ity taona ity, noho izany dia ahena ny vokatra najanon'i Apple ary nampitsahatra ny fivarotana tamin'ny fomba ofisialy.
Raha ny iPhone 12 sy Series 6, ny taranaka vaovao amin'ireo fitaovana ireo, zara raha nampiditra vaovao manan-danja izy ireo, ho vokatra mety tsara hividianana mandritra ny Black Friday satria mbola manana fiainana lava be izy ary saika mitovy ny fiasa amin'ireo modely vaovao.
Mivarotra betsaka ve ny vokatra Apple amin'ny Black Friday?
Toy ny mahazatra, Apple dia tsy namoaka tolotra amin'ny alàlan'ny fantsom-pizarany ofisialy, noho izany dia mila sahirana mitsidika ny tranokalany ianao amin'ny 26 Novambra.
Ny Mac range miaraka amin'ny processeur M1, ilay navoakan'i Apple tamin'ny taon-dasa, dia lasa rmampihena ny vidiny tao anatin'ny volana vitsivitsy, na dia tsy antenaina amin'ny volana martsa 2022 aza ny fanavaozana azy, dia izao no fotoana tsara hividianana hividianana ny iray amin'ireo modely misy fihenam-bidy mety hahatratra hatramin'ny 20%.
Ny iPhone 12 amin'ny dikan-teny rehetra, ho hitantsika miaraka aminy fihenam-bidy avy amin'ny 10% hatramin'ny 15% amin'ny tranga tsara indrindra. Mihoatra na latsaka ny fihenam-bidy mitovy amin'izay azontsika antenaina amin'ny sehatra iPad sy Apple Watch.
Ny andiany faharoa amin'ny AirPods dia hanatevin-daharana ny antoko Black Friday ihany koa, miaraka amin'ny fihenam-bidy mety hahatratra hatramin'ny 20%, indrindra fa ilay maodely manana vata fampangatsiahana amin'ny alalan'ny tariby tselatra.
Hafiriana ny Black Friday ao amin'ny Apple
Ny Black Friday dia manomboka amin'ny 26 Novambra amin'ny 0:01 ary haharitra hatramin'ny 23:59 alina amin'io andro io ihany. Na izany aza, manomboka anio, Efa afaka mahita tolotra mahaliana momba ny vokatra Apple isika, indrindra amin'ny Amazon.
Aiza no hahitana fifanarahana amin'ny Apple mandritra ny Black Friday
Black Friday dia mitovy amin'ny AmazonRaha ny marina, Amazon dia iray amin'ireo orinasa mivarotra be indrindra amin'izao fotoana izao, indrindra amin'ny vokatra Apple, indrindra fa ny Apple dia nanokatra ny fivarotany manokana tao amin'ny Amazon, mba hahafahantsika mankafy ireo antoka mitovy amin'ny hoe nividy azy mivantana tamin'ny Apple.
Raha te hividy sasany ianao AirPods na iPad, MediaMarkt dia iray amin'ireo toerana tsara indrindra hitadiavana fifanarahana amin'izao andro izao.
Ao amin'ny Fitsarana anglisy no hahitantsika fifanarahana indrindra amin'ny Mac, fa mitandrema ary ataovy azo antoka hoe firy taona izy ireo, satria ity toeram-pivarotana ity dia mirona any aoriana kely raha ny modely azo amidy.
ny Mini Apple Store an'i K-TuinIzy ireo ihany koa dia safidy tsara hodinihina mandritra ity herinandron'ny Black Friday ity izay hahitantsika vokatra Apple marobe misy fihenam-bidy mahaliana.
Si buscas fitaovana ho an'ny iPhone, Mac na Apple Watch anaoTokony hijery ny tranokalan'ny Macnificos ianao, izay isan-taona dia manamboatra kojakoja sy vokatra Apple be dia be ho antsika miaraka amin'ny fihenam-bidy manintona.
1 Inona no vokatra Apple amidy amin'ny Black Friday
1.6 Apple Pencil
3 Fivarotana hafa misy tolotra amin'ny Black Friday
4 Inona no atao hoe zoma mainty
5 Rahoviana no ankalazaina ny zoma mainty
6 Inona no vokatra hovidiana amin'ny Zoma Mainty
7 Nahoana no mendrika ny mividy vokatra Apple amin'ny Black Friday?
8 Mivarotra betsaka ve ny vokatra Apple amin'ny Black Friday?
9 Hafiriana ny Black Friday ao amin'ny Apple
10 Aiza no hahitana fifanarahana amin'ny Apple mandritra ny Black Friday
10.2 media Markt
10.3 Fitsarana anglisy
10.4 K Tuin
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Zoma mainty ao amin'ny Apple
Mihevitra i Mark Gurman fa mbola te-hamoaka AirPower i Apple
Mbola manana fotoana hahazoana Bitdefender ho an'ny Mac ianao miaraka amin'ny tahiry hatramin'ny 70%.